Ny lisitry ny farany ny 'Slice of Life' Anime tianao ny mijery - Hafa
Ny lisitra faramparan'ny Anime 'Slice of Life' Mila Dinihinao
Tsy misy zavatra mitovy amin'ny sarisary 'slice of life'. Rehefa dinihina tokoa, izany Izay indrindra inona no azonao.
Ny sombin-tsoratra dia miaina isan'andro isan'andro.
Ny tolona, ​​ny fanamby ary ny fotoana sambatra ataon'izy ireo.
Ary mifantoka mafy amin'ny fomba fiaina endri-tsoratra.
Na araka ny famaritan'i Google azy:
“Fanehoana zava-misy amin'ny zavatra iainana andavanandro amin'ny sarimihetsika, filalaovana na boky.”
Ity misy lisitry ny sasany amin'ireo seho SORATRA mendrika hijerena.
Sakura Quest dia manomboka amin'ny Yoshino Koharu. Ankizivavy iray izay sahirana amin'ny fihazana asa any Tokyo, ary lasa tsy nahy tamin'ny asa any ambanivohitra.
Hevitra vitsivitsy avy amin'ny Sakura Quest:
Mifantoka amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany (amin'ny maha orinasa).
Ny anime dia miorina amin'ny a tena fiainana Vohitra Japoney, antsoina hoe Manoyama.
Ny tanjon'ny tetika dia ny hamelona indray an'i 'Manoyama', ary hitaona ireo mpizahatany mankany amin'ilay tanàna hadino.
Misy litera vehivavy lehibe 5 eo ho eo. Samy manana ny toetrany sy ny toetrany avy.
Ary tsy misy serivisy mpankafy izay tsy mety.
Raha te hijery an'io miaraka amin'ny olon-kafa ankoatranao ianao dia afaka. Fanompoana mpankafy maivana.
Sakura Quest dia tsara ho an'izay liana amin'ny raharaham-barotra sy fizahan-tany (miaraka amin'ny hatsikana sasany).
Fa Toradora dia ho an'izay maniry andian-tantaram-pitiavana misy fizarana 'mampihetsi-po'.
Amin'ny voalohany dia momba Ryuuji sy Taiga.
Taiga dia manararaotra tsy an-kijanona an'i Ryuuji tsy an-kijanona.
Fa rehefa miditra amin'ity anime ity ianao, mieritreritra fa tsy manery anao handatsaka azy io, manomboka mivoatra bebe kokoa ny toetra amam-panahy tsirairay avy, ary mianatra bebe kokoa momba ny litera tsirairay ao anaty tolona sy any ambadiky ny tranony ianao.
Taty aoriana dia manomboka mahazo ny anime mafy tsy toy ny andiam-fiainana hafa hitanao.
Noho io antony io, Toradora dia sangan'asa ao amin'ny departemanta 'slice of life'. Ary tokony hojerenao izany.
3. Tsenan Tamako
Vita avy amin'ny Kyoto Animation, Tamako Market dia sombin'aina tsy manan-tsiny momba an'i Tamako, zanakavavin'ny mpandraharaha iray izay manome fivelomana an'i Mochi.
Tsy toy ny sarimiaina toa an'i Sakura Quest, ny Tamako Market dia tsy manana fifantohana na tetika manokana. Ankoatra ny fanasongadinana ny fomba fiainana andavanandro amin'ny fiainana amin'ny tanàna kely, fanaovana raharaham-barotra, vorona miteny matavy, sekoly ary hatsikana.
Aza manaiky ho voafitak'izany. Ity no iray amin'ireo lehibe indrindra sasatra fampisehoana anime izay hampiadana anao.
Ary tsy mila mieritreritra be loatra ny zavatra jerenao koa ianao ... Satria mangatsiaka sy tsotra io.
Vakio: 6 amin'ireo studio anime lehibe indrindra
4. mpamosavy manidina
Raha ny tsenan'i Tamako dia momba ny tanàna iray izay manao Mochi, Flying Witch dia momba azy mpamosavy amin'ny fiofanana.
Makoto Kowata mifindra any ambanivohitra miaraka amin'ny fianakaviana mba hahazo “traikefa manokana” izay hanomana azy amin'ny ho avy.
Na dia tsy mahita 'majia' be aza ianao amin'ity anime ity, rehefa manao izany ianao dia ampiasaina hanamaivana ny toe-tsaina, na hanazavana zavatra ezahin'ny sary an-tsary aseho.
Aza manantena hatsikana be loatra amin'ity iray ity, fa manantenàa hahatsapa ho mangatsiatsiaka sy milamina toy ny tsy hain'ny anime hafa.
Mifandraika: Ilay Anime # 1 Tokony hojerenao farafaharatsiny 'indray mandeha' amin'ny androm-piainanao
Anime toy ny Toradora manasongadina ireo tolona mampihetsi-po amin'ny fitiavana (amin'ny farany).
Fa manasongadina an'i Orange famoizam-po, famonoan-tena, tantaram-pitiavana, fanamelohana ary fanararaotana. Izay mampiavaka azy amin'ny andiam-piainanao.
Toy ny olona 'normal' rehetra, Kakeru Naruse meloka noho ny fahafatesan'ny reniny. Satria ny andro nahafatesany dia nilaza zavatra tsy tokony hanana izy.
SY hanenina manimba azy hatrany ivelany ka hatrany ivelany.
Andian-dahatsoratra lalina sy misy dikany ity ka tadidio ao alohan'ny hanapahanao hevitra hijerena. Satria tsy mahazo aina izy noho ny antony miharihary.
Tamin'ny voalohany dia tsy hitako izay hatao Kokoro Connect, fa rehefa mandroso izy dia manomboka mamiratra sy mamony toy ny voninkazo Iris.
Kokoro Connect dia manodidina ny mpianatra 5 izay voatery milalao miaraka amin'ny 'andrana' izay mizaha toetra ny fisakaizany, ny fahadiovany, ny fihetsem-po ary ny fifandraisany.
Mampieritreritra. Ka tsy azo inoana fa ity anime ity tsy hanao mahatonga anao hieritreritra ny fiainanao manokana amin'ny fomba hafa.
Misy tantaram-pitiavana ihany koa raha manintona ny tianao izany.
Clannad dia fantatra amin'ny maha 'sangan'asa' raha resaka tantaram-pitiavana sy sombin'aina. Ary manaiky aho rehefa nijery azy io.
Ny vanim-potoana voalohany dia mifantoka amin'ny Tomoya Okazaki sy Nagisa Furukawa.
'Malemy' ara-batana i Nagisa, ary misy antony lalina kokoa noho ny antony. Fa ny vanim-potoana voalohany an'ny Clannad dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fialamboly, miaraka amin'ny fotoana 'hafahafa' misy heviny.
Andiany 2 no ivoaran'i Clannad ho zavatra lalina, mampivarahontsana ary miraraka amin'ny enta-mavesatra.
Ka raha mandinika an'i Clannad ianao dia alao antoka fa samy mijery ireo vanim-potoana roa ianao mba hahazoana ny tantara sy ny zavatra niainana feno.
Novokarin'i Kyoto Animation, Kanon no antsoiko ny zandrin'i Clannad.
Mahazatra ny Kyoto Animation, mizara ny fomba, ny endriny ary ny endri-tsoratra mahery fitoviana.
Ny sarimiaina dia mitovy tsara amin'ny fotoanany, ary mendrika ihany koa ny tantara. Saingy i Kanon dia manaloka ny fahombiazan'i Clannad.
Ankoatr'izay, raha mila zavatra ankoatry ny Clannad misy tantara sy lohahevitra hafa ianao, Kanon no safidy tsara indrindra.
Misy sombin'aina vitsivitsy azo ampitahaina amin'ny Clannad toa an'i Kanon izay mendrika hotononina.
9. Lalao Vaovao!
Lalao vaovao! dia iray amin'ireo sombin-tsarimihetsika vaovao azo jerena indrindra amin'ny indostria. Navoaka tamin'ny 2016.
Aoba Suzukaze no mahery fo, ary ny nofinofisiny dia ny hiasa amina orinasa filalaovana lalao ary hamorona lalao ho fivelomana.
Ny fizarana 1 sy 2 dia manaraka an'i Aoba Suzukaze amin'ny diany eo amin'ny sehatry ny lalao. Miaraka amin'ireo tarehin-tsoratra hafa izay miasa amin'ny orinasa iray (miaraka amin'ny tanjona mitovy).
Noho izany dia hankafizinao izany raha mahaliana manokana ny 'gaming' na 'programa'.
Kalitaon'ny sarimiaina dia iray amin'ireo toetra matanjaka indrindra an'ny New Game. Mamirapiratra, maro loko, tsara tarehy ary tsara tarehy izy.
Namboarin'i Kyoto Animation, Violet Evergarden dia anime iray izay mahafantatra ny fomba fitantarana tantara mampihetsi-po.
Ny fizarana fizarana tsirairay dia mifantoka amin'ny mpilalao fototra, Violet, izay ny asany dia ny manampy ny olona hanoratra taratasy amin'ireo olona tiany.
Mba hanomezana azy ireo fanidiana.
Ny teny tsy afaka mamaritra ny habetsahan'ny a sanganasa ity anime ity dia.
Izy io dia azo ampitahaina amin'ny fampisehoana toa an'i Clannad amin'ny fitantarana tantara mampihetsi-po.
Mifandraika: Teny notsongaina 9 avy amin'ny Violet Evergarden izay tsy hohadinoinao
Barakamon dia momba an'i Seishu Handa , mpiantsoantso izay nirahina hipetraka amin'ny nosy hiasa amin'ny fitondran-tena ratsy.
Ireo fizarana 12 rehetra dia mifantoka amin'ny fivoaran'ny tena manokana an'i Seishu Handa, ny diany ary ny fiovana lalovany tamin'ny naha-olona azy.
Misy karazana vanim-potoana tsara koa eo amin'ireo mpilalao fototra sy mpanohana ao Barakamon izay tianao.
12. Mpanampy dragona an'i Miss Kobayashi
Mpanampy dragona an'i Miss Kobayashi dia fahafinaretana madio, miaraka amina fotoana mafana roa hanovana ny fiakarana isaky ny fizarana roa.
ny lehibe ny maha samy hafa an'io sy ny fiainana tapaka tsy tapaka, dia mifantoka amin'ny toetran'ny olombelona 1, sy dragona tahaka ny olombelona.
Azonao atao ny manantena ”ny mpankafy sasany eto Lucoa, toetra amam-panahy mazava ho azy noforonina ho an'ny fanervice. Saingy ambany lavitra noho izay antenainao amin'ny fampisehoana azo ampitahaina izany.
Himouto Umaru Chan dia miresaka momba ny rahavaviny kely Umaru, ary ny zokiny lahy: Taihei Doma.
Umaru dia tarehy roa, miaina fomba fiaina roa mba hiainana mifanaraka amin'ny andrasan'ny olona fotsiny.
Toy ny tovovavy mpanampy an'i Miss Kobayashi's Dragon, mahafinaritra i Umaru Chan, ary hihomehy anao ny hatsikana.
Indrindra raha miditra amin'ny lalao video amin'ny fomba misy ny MC ianao.
14. Aria Ilay Animation
Aria Ilay Animation dia ny sary mihetsika entina maka fanorana. Satria miala sasatra, indraindray cheesy, ary mangatsiaka loatra mba 'serieux'.
Tsy dia misy hatsikana firy amin'ity karazana anime ity, saingy tsy mila izany ianao satria mampifangaro ny fiainana amin'ny sci-fi sy ny nofinofy.
Ary ny tanàna misy ny anime dia nalaina avy tao amin'ny tanànan'ny Venice, any Italia. Miaraka amin'ny fanovana vitsivitsy hahatonga azy tsy manam-paharoa.
15. Classroom an'ny Elite
Efitrano fianarana an'ny Elite dia na inona na inona toy ny andiam-piainanao isan'andro.
Fa maninona Manana lafiny maizina kokoa noho ny ankamaroany izy io. Mahita izany haingana be ianao ao anatin'ny fizarana vitsivitsy voalohany.
Inona moa fa ny teti-dratsy dia miorina manodidina ny mpianatra terena hifaninana amin'ny tsirairay mba ho tafavoaka velona sy hahazo vola, ao anatin'ny rafitry ny sekoly sy ny lalàna henjana.
Anime ao amin'ny ligy misy azy.
16. Fitiavana, Chunibyo ary delestazy hafa
Chunibyo no karazana slice amin'ny fiainana izany dia hahatonga anao hikoropaka ary hanery anao alatsaho io.
Na farafaharatsiny mba zavatra niainako… mandra-pahatongako nanome azy fotoana iray hafa ary nankafiziko azy tanteraka.
Ny tantara dia ny ankamaroany momba an'i Rika, zatovo mino fa manana hery lehibe izy. Ary Yuta, lehilahy mahery fo iray izay tratry ny delestazy an'i Rika.
Manomboka manjary tantaram-pitiavana kely ny zavatra amin'ny vanim-potoana faharoa amin'ity andiany ity.
17. Filankevitry ny mpianatra tsara indrindra
Ny tsikombakomba dia amin'ny anarany daholo.
Momba ny filankevitry ny mpianatra tsara indrindra sy ny andavanandron'izy ireo amin'ny fitantanana ny sekoliny. mifantoka indrindra an'i Rino Rando sy Kanade Jinguji.
Ny toetra amam-panahy tsirairay dia tsy hay hadinoina, na dia misy endri-tsoratra 8 aza. Ary mahazo fifangaroan'ny tantaram-pitiavana, hatsikana mahatsikaiky ianao, ary fizarana kely mampitony fo hampihenana azy rehetra.
Tiako ny anime izay afaka mampihomehy ahy ary ataovy izay hahatsapako ireo tarehin-tsoratra.
Hinamatsuri nahafehy ny kanto fanaovana samy.
Amin'ny lafiny iray dia manana an'i Hina ianao, zazavavy manana hery mihoatra ny natiora (miara-miaina amin'ny Yakuza).
Ary manana Anzu ianao, zazavavy manana fahaizana mihoatra ny natiora… raha tsy hoe tsy manan-kialofana izy.
Hitanareo ireo singa roa ireo dia milalao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ny anime dia manao asa tsara amin'ny 'fanisana' azy tsara.
Hyouka dia miresaka tovovavy mikiry mahasosotra: Eru Chitanda, ary bandy kamo: Houtarou Oreki.
Miaraka (miaraka amina endri-tsoratra hafa) dia mamaha mistery izy ireo ary mahita valiny amin'ireo fanontaniana sarotra.
Saika toy ny mpitsongo.
Ny zavatra mahagaga indrindra momba an'i Hyouka dia tena mampiala voly izany, na eo aza ny lohahevitra toa mankaleo sy salantsalany.
ReLife dia andiam-piainana azo zakaina momba ny fahatanorana sy ny fanovana ny fiainanao ho amin'ny tsara kokoa.
Kaizaki Arata dia mahazo vintana ary omena fotoana hampiodina ny fiainany, ary hanitsy ny lesoka vitany fony izy olon-dehibe tany Japon.
Ny manaraka dia ny hatsikana madio, ary tantara misy dikany manaraka ny tarehin-tsoratra vitsivitsy ao amin'ny oniversite.
Indraindray dia lasa 'maizina' kely ihany koa izy.
Ranma dia nataon'ireo mpamokatra Inuyasha ihany. Ka sekoly taloha amin'ny fenitra 2018 io.
Fa raha mila sombin'aina iray ianao silaka fiainana aingam-panahy anio araka ny ahalalantsika azy dia atombohy amin'ny Ranma 1/2.
Iray amin'ireo lehibe indrindra io tamin'ny fototra slice of life dia mampiseho fa mbola misy ifandraisany sy mendrika ny hatolotra anao.
22. Ny fitsangatsanganan'i Kino (Ary ny dia nataon'i Kino)
Ny fitsangatsanganan'i Kino no vanim-potoana voalohany (sy tokana) amin'ny andian-tsarimihetsika Kino.
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, ary porofo an'izany ny sarimiaina. Aza manaiky hoesorina amin'izany.
Raha ny fitantaran-tantara dia Kino's Journey no betsaka indrindra mamelombelona anime nojereko. Ary ny lafiny fandehanana any amin'ny firenena sy tanàna am-polony dia antony manokana iray hafa handinihana azy.
Kino's Journey dia anime 'fanampiny' misy sary mihetsika maoderina ary sary hita maso ankehitriny. Fa ny tena izy dia ny tsara indrindra kinova amin'ireo roa.
Ity anime ity dia karazana hafahafa, mahaketraka, ary amin'ny lafiny sasany, effed up. Io ilay antsoinao hoe 'hatsikana mainty' miaraka amin'ny sombin'aina no tena ifantohany.
Tomoko Kuroki dia tovovavy tanora rahateo tsy manana fahatokisan-tena ambany, tsy misy namana, ary ambany fiheverana ny tenany.
Ka ny karazan-javatra ataony mba hisarihana ny saina, hahamarika azy, ary 'hanaovana ezaka' dia mivadika ho toe-javatra hafahafa sy mahatsikaiky izay hampihomehy anao.
Raha tsy izany dia hahatonga anao hikorontana.
24. Ilay fiainana mampidi-doza an'ny Saiki K
Ny Saiki K dia fomba fiasa mamelombelona amin'ny sombin'aina satria manampy singa iray amin'ny nofinofy, hery lehibe, ary protagonista mampiditra izay mahita ny fahaizany ho manahirana.
Eo imasony, Saiki K dia te-hiaina ny fiainany fotsiny ary tsy hanelingelina olona.
Saingy hitanao amin'ny hatsikana mampihomehy sy parodies tsy an-kijanona, mazava ho azy fa be loatra ny angatahina.
Tsy ho hitako mihitsy ny zava-misy tena misy silaka fiainana andiany raha mbola velona aho.
Nana no tantaram-pitiavana 'marina amin'ny fiainana' indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Novokarin'i Madhouse.
Manoro hevitra ny olon-dehibe olon-dehibe rehetra (sy ny Arivo Taona) aho hijery izany. Satria hanokatra ny masonao amin'ny tontolo manodidina anao izy io, amin'ny fomba azo tanterahina sy mora hifandraisana aminao.
26. Sipa tovovavy
Squid Girl dia zazavavy avy amin'ny ranomasina miaraka amin'ny hery sy ny fahaizan'ny angisy Na ny fomba firesany aza dia somary hafahafa, hafahafa, fa indrindra indrindra, mahatsikaiky.
Anisan'ny mahasarika mpamono olona anime izany.
Miaraka amin'ny fizaran-taona 3, ary OVA, ity dia fiainana an-tany milamina sy tsy misy fikarakarana mba hampifalifaliana anao.
Squid Girl ho ahy dia ambany saina, angamba satria hita ho 'zaza' loatra (na inona na inona dikan'izany).
Nodame Cantabile dia mandray ny cliches tantaram-pitiavanao , ary manorotoro azy tsy misy nenina.
Raiso ny mpilalao fototra: Chiaki ohatra.
Lehilahy iray fa tsy manolotra elo ho an'ilay zazavavy mankafy azy, mandeha izy ary mampiasa azy ho azy.
Raha zavatra tsy mahazatra sy mahaliana no tadiavinao dia mety hahagaga anao i Nodame Cantabile.
28. Tetikasa Love Idol School Live
Ny Love Live dia sombin-tantara “tovovavy mahafatifaty manao zavatra mahafatifaty”. Fa tsy marina tanteraka izany.
Ny drafitra lehibe dia ny momba an'i Honoka Kousaka, ireo namany, ary ny tanjon'izy ireo hiaraka ho tonga sampy am-pianarana.
Iray amin'ireo seho anime voalohany 'zazavavy rehetra' nojereko, ary ny mpandray anjara tsirairay dia mahatonga ny Love Live ho mahafinaritra sy hahafinaritra kokoa.
Mifandraika: Fandraisana an-tsary 13 Fitiavana Idola An-tsekoly Live Love School tokony ho zaraina
Lucky Star dia hafa andian-tsarimihetsika zazavavy rehetra. Fa tsy maninona izany raha misokatra ny sainao ary maniry hatsikana TSARA.
Konata Izumi no endrika milamina sy maneso izay manazava ny seho. Ary ny namany - Kagami no mifanohitra amin'izany.
Manantena ny hahita andinin-tsoratra momba ny lalao, kolontsaina Otaku, TSY misy tetika, ary fizarana kisendrasendra izay hahatonga anao hanontany tena hoe WTF aza dia ataonao amin'ny tenanao ihany.
Gakkou Gurashi, na School Live amin'ny teny Anglisy, dia andian-tantara mahatsiravina momba ny zombie, ny aretin-tsaina ary ny psikolojia an'ny toetra tsirairay.
Ny mpandray anjara fototra rehetra dia voatery miaina amin'ny 'ambiny' satria tapitra izao tontolo izao. Satria mandady miaraka amin'ny Zombies izy.
Yuki Takeya, iray amin'ireo mpilalao fototra dia miteraka aretina ara-tsaina amin'ny fihenjanana sy toe-javatra mahaketraka rehetra.
Raha zavatra mangatsiaka sy maizina tadiavinao dia ity no sombin-tsarimihetsika fiainana hidirana.
Ka aza avela ny 'mahafatifaty' hamitaka anao.
31. Tanaka Kun dia tsy misy lisitra foana
Tanaka dia mpianatra kamo izay natokana ho an'ny tombontsoany manokana . Raha ny marina dia nangatsiaka be izy, hieritreritra ianao fa nifoka sigara sy nahazo avo lenta.
Ny namany Oota dia olona matotra, mandinika ary azo ampiharina izay iankinan'i Tanaka.
Tsy dia be ny tetika, fa tsy misy NILA ho. Satria io no karazana sarimihetsika jerenao ho an'ny mpilalao, ny fialan-tsasatra ary ny hatsikana indraindray izay ao anatin'ny liginy manokana.
Mpampianatra mpamosavy kely dia iray amin'ny sarimihetsika tsara indrindra an'ny Studio Trigger ao amin'ny katalaoginy.
Tsy ho hitanao eto ny mpankafy. Na zavatra hafa hitadiavan'ny manary an-tsokosoko any amin'ny fanservice noho ny fanservice.
Ny tetika dia momba an'i Atsuko Kagari, ary ny nofinofiny ho lasa mpamosavy afaka mitsiky ny olona.
Ity nofinofy tsotra ity dia mivadika ho traikefa nahafinaritra izay mahafinaritra, manabe ary mahatonga anao haniry ny hanatevin-daharana azy.
Io ilay karazana anime izay irinao ho hitanao tamin'ny fahazazanao, raha tsy nisy izany.
Tsy nieritreritra ianao fa ho feno ity lisitra ity raha tsy misy K-On sa tsy izany?
K-On no mpanjakavavy tsy voadinika ny silaka fiainana mampiseho. Toy izany ihany ny fihodinan'ny Kyoto Animation ho toy ny studio anime.
Tsy misy tetika, toy ny Lucky Star, ary ny famaritana ara-bakiteny ny 'tovovavy mahafatifaty manao zavatra mahafatifaty'.
Ary na eo aza izany dia vita tsara ny sary mihetsika, ny hatsikana dia mahazatra, ary toy ny silaka fiainana maro dia mora ny manafana azy satria mora tokoa ny mandeha.
Hanayamata dia momba an'i Naru Sekiya, tanora saro-kenatra izay mitaintaina sy mitebiteby amin'ny vahoaka be.
Farany nivory i Naru sy ny tarehin-tsoratra hafa ary nanomboka nanao izay antsoin'i Japon Yasakoi.
Izay karazana dihy tsy miankina.
Hanayamata dia 'tovovavy mahafatifaty manao zavatra mahafatifaty' hafa, afa-tsy ny volavola sy ny endri-tsoratra no tena misy. Amin'ny maha anime toy ny K-On dia 'tahaka ny zaza' kokoa noho ny sary 'Moe'.
Iray amin'ireo sombin-fiainana madio indrindra io izay mampiseho fandanjalanjana tsara amin'ny zavatra rehetra antenainao, nefa tsy mankaleo na cliche be loatra.
35. Ilay Ampakarina Magus Fahiny
Ny Magus Bride taloha dia a Beautiful slice of life, azo ampitahaina amin'ny Violet Evergarden amin'ny hatsaran'ny toetrany.
Momba izany Hatori Chise , kamboty manan-kery manokana izay nolavina sy nolavina nandritra ny androm-piainany noho ny 'maha-izy azy'.
Ny onja voalohany amin'ity andiany ity dia manomboka matanjaka, saingy miankina amin'ny fomba fijerinao dia milatsaka kely ny tapany farany.
Fa mbola mendrika ny hatolotra
36. Haganai: Tsy manana namana maro aho
Haganai maka ny maodelim-piainana mahazatra, ary avy eo manampy fampijaliana, fanirery ary Ecchi ny mifangaro.
'Harem' koa io.
Ka raha tsy nanantena mpankafy ianao… dia fantatrao izao izay antenaina.
Haganai dia sombin'aina tsy mitovy amin'izay ho hitanao. Noho ny fomba iatrehany ny fanirery sy ny fanaovana habibiana. Raha mbola mitantana manipy hatsikana sy tantaram-pitiavana nefa tsy mahamenatra ny tenany.
37. Raha Ho an'ny Zanako vavy, dia ho resiko mihitsy ny Tompo Demonia!
Raha ho an'ny zanako vavy dia andiany anime novokarina tamin'ny taona 2019 avy amin'ny Maho Film (studio vaovao).
Anime dia natsangana manodidina ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka vavy eo amin'ny zanak'olombelona sy ny demonia.
Toa mampientam-po kokoa noho ny manaraka ny fizarana tsirairay, ary ny tantara dia miorina amin'ny fiantsoana fihetseham-po sy fotoana 'mahafatifaty' izay manasarotra ny tsy fankasitrahana.
Eo ambanin'ny sehatra - a manan-danja andiany izay hanolotra zava-baovao ho an'ny mpankafy Usagi Drop sy Barakamon.
Teaser Takagi mahay.
Tsy efa nandre ve ianao? Sakamoto aho!
Fiainana isan'andro zazalahy ambaratonga faharoa.
Famerenana tsy Non Byori.
Inona koa no ampianao izay mendrika hotononina?
15 amin'ireo andian-tsarimihetsika Anime Adventure tsara indrindra tokony hanombohanao mijery